၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM) တွင်ထိပ်ဆုံး ၅ ခု Martech Zone
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော Digital Asset Management (DAM) တွင်ထိပ်တန်း ၅ ခု
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2021 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2021 Amalie Widerberg
2021 သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း, ဖြစ်ပျက်အချို့တိုးတက်မှုရှိပါတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM) စက်မှုလုပ်ငန်း။
၂၀၂၀ တွင် covid-2020 ကြောင့်အလုပ်အလေ့အထနှင့်စားသုံးသူအပြုအမှုအပြောင်းအလဲများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ Deloitte ၏အဆိုအရရောဂါကူးစက်မှုကာလအတွင်းဆွစ်ဇာလန်၌အိမ်မှအလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ဦး ရေသည်နှစ်ဆတိုးလာခဲ့သည်။ အကျပ်အတည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်လည်းရှိသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်ကိုတိုးချဲ့ရန်။ McKinsey သည်စားသုံးသူများအနေဖြင့်ဒီဂျစ်တယ် ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်များကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ယခင်ကထက်များစွာပိုမိုများပြားစွာလုပ်ဆောင်ရန်တွန်းအားပေးနေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ B2B နှင့် B2C ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်သည်.
ဤအကြောင်းပြချက်များနှင့်အခြားအကြောင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ကိုလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအခြေခံဖြင့်စတင်နေကြသည်။ ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းအတွက်လိုအပ်ချက်သည်လာမည့်နှစ်တွင်ပိုမိုမြင့်တက်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရန်အကြောင်းများရှိသည်။ လူအများအပြားအဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအွန်လိုင်းတွင်တိုးမြှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအရေအတွက်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်မှုသိသိသာသာကြီးထွားလာခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုသို့သံသယအနည်းငယ်သာ ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲ လာမည့်နှစ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အရေးပါသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းများအတွက်သိုလှောင်ထားသည့်အရာကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုပြီးယခုနှစ်အတွက်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောထိပ်တန်း ၅ ခုကိုစာရင်းပြုစုပါမည်။
လမ်းကြောင်း 1: Mobility နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု
အကယ်၍ ၂၀၂၀ ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ခုကိုသင်ပေးခဲ့ရင်၊ ၎င်းသည်တက်ကြွသောအလုပ်အလေ့အထများ၏အရေးပါမှုဖြစ်သည်။ အဝေးမှနှင့်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်အားသာချက်တစ်ခုမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကြွင်းမဲ့လိုအပ်ချက်သို့သွားသည်။
DAM ပလက်ဖောင်းများသည်လူနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအဝေးမှအလုပ်လုပ်ရန်ကူညီနေသော်လည်းဆော့ဖ်ဝဲပံ့ပိုးပေးသူများသည်တက်ကြွသောအလုပ်များကိုပိုမိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်ဟုယုံကြည်ခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ ၎င်းတွင်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများကိုအက်ပ်များမှတဆင့်အသုံးပြုခြင်း (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ် (SaaS) သဘောတူညီချက်မှတဆင့်တိမ်တိုက်သိုလှောင်ခြင်းအတွက်လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းကဲ့သို့သောများစွာသော DAM လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်စေသည်။
FotoWare တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းပိုမိုလိုလားသောစားသုံးသူများအတွက်ပြင်ဆင်မှုစတင်ခဲ့သည်။ SaaS ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအပြင်၊ ၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လတွင်အဖွဲ့များသည်၎င်းတို့၏ DAM ကိုသွားလာရင်းသုံးခွင့်ပြုသည့်မိုဘိုင်း app အသစ်ကိုလည်းစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေကတဆင့်.
လမ်းကြောင်း ၂ - အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သဘောတူညီချက်ပုံစံများ
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အီးယူ GDPR စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစတင်ကျင့်သုံးပြီးကတည်းကစီးပွားရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်သူတို့၏အကြောင်းအရာနှင့်ခွင့်ပြုချက်များကိုခြေရာခံရန်ပိုမိုလိုအပ်လာသည်။ သို့တိုင်ဤစည်းမျဉ်းများကိုထိရောက်စွာလိုက်နာရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်ရုန်းကန်နေရသောအဖွဲ့အစည်းများစွာကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က DAM အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပြflနာများကိုဖြေရှင်းရန်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပြုပြင်ပေးခဲ့သည် GDPR နှင့်သက်ဆိုင်သည်, ဤအဖြစ်ကောင်းစွာ 2021 ခုနှစ်တွင်ထင်ရှားတဲ့အာရုံစိုက်ဖြစ်သင့်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် GDPR ကို ဦး စားပေးသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ပုံစံများသည်သက်ဆိုင်သူများစွာ၏ဆန္ဒစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးနေရာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
DAM အသုံးပြုသူ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပုံရိပ်အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအဓိကအားသာချက်များအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့သည်။
ဒီဂျစ်တယ်သဘောတူညီမှုပုံစံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် GDPR ကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်သာမကရုပ်ပုံအခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးအတွက်ပါဝါပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။
လမ်းကြောင်း 3: ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစည်းမှု
DAM တစ်ခု၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာအချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်များစွာသောအလုပ်များစွာကိုလုပ်ဆောင်သောအခြားပရိုဂရမ်များတွင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ၀ န်ထမ်းများအားပလက်ဖောင်းမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့်ပေါင်းစည်းခြင်းသည် DAM ၏အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။
အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအမှတ်တံဆိပ်များသည်သီးခြားဆော့ဝဲလ်ပံ့ပိုးသူများကို ဦး စားပေးပြီးတစ် ဦး တည်းရောင်းချသူ suite solution များမှဝေးကွာသွားစေသည်။
ဆော့ဗ်ဝဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချသူတစ် ဦး နှစ် ဦး နှင့်တွဲဖက်ခြင်းထက်အခွင့်ကောင်းများစွာရှိသည်မှာသေချာသည်။ သို့ရာတွင်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏လွတ်လပ်သောဆော့ဝဲများမှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိစေရန်မှန်ကန်သောပေါင်းစည်းမှုများပြုလုပ်ထားရမည်။ ထို့ကြောင့် APIs နှင့် plugins များသည်သက်ဆိုင်ရာနေလိုသောမည်သည့် software provider အတွက်မဆိုအရေးပါသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက်၍ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
FotoWare မှာငါတို့သတိထားမိတယ် Adobe Creative Cloud နှင့် Microsoft Office အတွက် plugins များ အထူးသဖြင့်စျေးကွက်သမားများအကြားရေပန်းစားသည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ PIM စနစ် (သို့) CMS နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အကြောင်းမှာစျေးကွက်သမားအများစုသည်မတူညီသောပရိုဂရမ်များနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများတွင်ကွဲပြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအသုံးပြုကြရလိမ့်မည်။ ပေါင်းစပ်မှုများရှိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်များကိုအမြဲတမ်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ချခြင်းနှင့်တင်ရန်လိုအပ်မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
လမ်းကြောင်း 4: အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု
DAM တစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါအချိန်ပိုပေးရသည့်အလုပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ metadata များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ AIs များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုဤတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုထပ်မံလျှော့ချနိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင် DAM အသုံးပြုသူအနည်းငယ်သာဤနည်းပညာကိုအသုံးချနေကြသည်။
ထိုအဆိုအရ FotoWare စက်မှုလုပ်ငန်းသုတေသန ၂၀၂၀ မှစ၍
DAM အသုံးပြုသူ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ AI တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ၁၀၀% သည်နောင်တွင်ယင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စီစဉ်ထားပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ DAM တန်ဖိုးကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
တတိယပါတီရောင်းချသူနှင့် AI ထောက်ပံ့သူနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပုံရိပ်, FotoWare တွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ, ဤမျိုး၏ပေါင်းစည်းမှုလူကြိုက်များသာတိုးမြှင့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် AIs များသည်တိုးတက်နေပြီး၊ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဘာသာရပ်များပိုမိုသိရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကျကျလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ပုံရိပ်များကိုမှန်ကန်သောအရောင်များဖြင့်မှတ်မိနိုင်ပြီး tag ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် developer များကမူအနုပညာကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ၎င်းသည်ပြတိုက်များနှင့်ပြခန်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော feature တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်ဤအဆင့်တွင်မျက်နှာများကိုကောင်းစွာသိနိုင်သော်လည်းအချို့သောတိုးတက်မှုများမှာအလုပ်များဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် facemasks များကိုသုံးသောအခါမျက်နှာ၏အစိတ်အပိုင်းများသာမြင်နိုင်သည်။
လမ်းကြောင်း 5: Blockchain နည်းပညာနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု
၂၀၂၁ အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပဉ္စမလမ်းကြောင်းမှာ blockchain technology ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုခြေရာခံရန်လိုအပ်သော bitcoins များမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်သာမကဘဲ၊ နည်းပညာသည်မဝေးတော့သည့်အနာဂတ်ရှိအခြားဒေသများတွင်ပိုမိုထင်ရှားလာနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့် DAM သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
blockchain ကို DAM ပလက်ဖောင်းများသို့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဖိုင်တစ်ခုအတွင်းသို့ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ ပိုမိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်းသည်အချိန်နှင့်အမျှလူတို့အားဥပမာအားဖြင့်ရုပ်ပုံတစ်ခုအားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲမှုရှိ၊
Digital Asset Management သည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီး FotoWare တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ဘာကမ်းလှမ်းနိုင်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်မကျေနပ်သောအစည်းအဝေးကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
Fotoware DAM ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ပါ
Tags: Adobe ဖန်တီးမှုမိုcloud်းတိမ်ကိုစီးaiဉာဏ်ရည်တုblockchainblockchain နည်းပညာခွင့်ပြုချက်ပုံစံများရေကာတာရေကာတာတည်ဆောက်မှုဆည် software ကိုရေကာတာDeloitteဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစည်းမှုဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုခေတ်ရေစီးကြောင်းဓါတ်ပုံgdprစိတ်ကူးမက်ကင်ဆေးMicrosoft က Office ကိုpinအခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းခေတ်ရေစီးကြောင်း
Amalie Widerberg သည် FotoWare တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Digital Asset Management (DAM) ရောင်းချသူဖြစ်သည်။ သူမသည် ESST (ဥရောပရှိလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ) ဘွဲ့ရရှိထားပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် DAM ရှုခင်းများအတွက်များစွာသိုလှောင်ထားနိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
Perfect LinkedIn Profile ကိုတည်ဆောက်ရန် Ultimate Guide
Imagga: Artificial Intelligence မှပံ့ပိုးထားသော Image Recognition Integration အတွက် API